ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံတယ် အမှန်တရားပေါ်လာမှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ – SKP Entertainment
ကိုယ့်ကိုကိုယ်ယုံတယ် အမှန်တရားပေါ်လာမှာပါလို့ဆိုလာတဲ့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ
မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့် စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေတတ်သော ဆေးဝါးများဆိုင်ရာဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၉ (က/၂၁) နဲ့ ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး Nang Tin Moe Thu အကောင့်မှ ဖြိုးပြည့်စုံအကြောင်းကို ယခုကဲ့သို့ ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံဟာ ကိုယ်ချင်းစာစိတ်ရှိပြီး မာန်မာန မရှိတဲ့ အနုပညာရှင် တစ်ယောက်ဖြစ်ကြောင်းနဲ့၊ ဆရာဝန်ကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ အကြောင်းကို ပြောပြခဲ့ပါတယ်။ ဖြိုးပြည့်စုံဟာ အောက်တိုဘာလ ၇ ရက်နေ့မှာ ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခြင်း ခံခဲ့ရပါတယ်။ အဆိုပါအမှုကြောင့် ပရိတ်သတ်တော်တော်များများလည်း စိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ အနုပညာရှင် မောင်နှမ များမှလည်း ဖြိုးပြည့်စုံနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝမ်းနည်းနေကြပါတယ်။ ဒီနေ့ မောင်လေးဖြိုးပြည့်စုံကို ဗဟန်းရဲစခန်းကနေ ရွာသာကြီးပို့ပြီး… ဆေးစစ်တယ်လို့ ကြားပါတယ်…ကောင်းမွန်မှန်ကန်တဲ့အဖြေထွက်ပါစေ မောင်လေးရေ… ??????အရမ်းကို ဖော်ရွေရည်မွန်ပြီး သူတပါးကို ကူညီတတ်တဲ့သူ… ကိုယ်ချင်းစာတရားအပြည့်ရှိပြီး… မာန်မာန လုံးဝကိုမရှိတဲ့ အနုပညာရှင်တစ်ယောက်မို့… မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့ ခုထိ ဆုတောင်းပေးနေမိတယ်… ???သတင်းစကြားကာစက တကယ်ကို မယုံတာပါ… ???သက်ငယ်မုဒိန်းတားဆီးကာကွယ်ရေးပွဲအတွက် စီစဉ်ရင်း သူနဲ့စသိခဲ့တယ်…အသိမောင်လေးတစ်ယောက်ကနေတဆင့်…သက်ငယ်မုဒိန်းဟောပြောပွဲမှာ… ဆရာဝန်တစ်ယောက်အနေနဲ့ Knowledge Sharing လုပ်ပေးပါလို့ ကမ်းလှမ်းတော့…လုံးဝကို အိုက်တင်မခံ… မဆိုင်းမတွဘဲ…ကျွန်တော်ရောက်အောင်လာမယ်… ရအောင်ကူညီမယ်ဆိုပြီး…
နယ်ကနေ ပွဲကိုမီအောင် ည လေယာဉ်နဲ့ပြန်လာပြီး ပြောပေး… ပွဲပြီးတာနဲ့ ချက်ချင်း ခရီးပြန်သွားရတာ…ကိုယ်က ကျေးဇူးတင်တယ်ပြောတာကိုတောင်… ကျွန်တော့်ကို ဒီလိုပြောခွင့်ပေးတဲ့အစ်မကို ကျွန်တော်က ပိုပြီး ကျေးဇူးတင်ပါတယ်တဲ့လေ…”သက်ငယ်မုဒိန်းပပျောက်ဖို့က ကျွန်တော်တို့ အားလုံးမှာတာဝန်ရှိတယ်… ခုလိုပါခွင့်ရတာပဲ ဝမ်းသာလှပါပြီတဲ့ “ငွေကြေးလည်း လုံးဝကိုလက်မခံဘဲ… တကယ့်ကို စေတနာသက်သက်နဲ့ လာကူသွားတာ… နယ်ကနေ အားချင်းပြန်လာ… ပြန်သွားရတဲ့ လေယာဉ်စားရိတ်တောင် သူ့အိတ်စိုက်…ပြည်သူတွေအတွက်…
ကလေးငယ်တွေအတွက် သူတတ်နိုင်သလောက် ထပ်ကူညီခွင့်ရှိမယ်ဆိုရင်လည်း… ခေါ်ပါနော်တဲ့… ပြောသွားသေးတာ…တကယ့်ကို စိတ်သဘောထားပြည့်ဝပြီး သူတပါးအပေါ်ကူညီချင်စိတ်… အားနည်းသူကို ဖေးကူလိုစိတ်တွေ အပြည့်ရှိတဲ့သူပါ…အမှန်တရားကို သေချာမသိပေမယ့်… မဖြစ်နိုင်ဘူးလို့ ထင်နေမိဆဲပါ… မဟုတ်ပါစေနဲ့လို့လည်း ဆုတောင်းပေးနေပါတယ်…
မောင်လေးရေ ?????? ဆေးအောင်ပါစေ?????? လို့ မျှဝေထားပါတယ်။ ဒ့ါအပြင် ဖြိုးပြည့်စုံကို သွားတွေတဲ့အကြောင်းကိုလည်း ယခုကဲ့သို့ ထပ်မံ မျှဝေထားပါတယ်။ မနက်က မောင်လေးဖြိုးပြည့်စုံကို ဗဟန်းရဲစခန်းမှာ သွားပြီး အားပေးဖြစ်တယ်…တကယ့်ကို မယုံနိုင်စရာကောင်းလောက်အောင် အေးအေးဆေးဆေးတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်ပါ…သူနဲ့အတူ အဖမ်းခံရတဲ့မောင်လေး ၂ ယောက်ကလည်း တကယ့်ကို အေးအေးဆေးဆေးသမားတွေ…ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အပြစ်မပြောကြရှာဘူး…
အစပိုင်းကတော့ ဘာမှန်းမသိတော့ လန့်ပြီးစိတ်ပူမိတယ် အစ်မရယ်တဲ့… အခုတော့ ကျွန်တော်တို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို ယုံတယ်… မဟုတ်တာ မလုပ်ထားတာမို့… အမှန်တရား ပေါ်လာမှာပါတဲ့… ???ဘယ်သူ့ကိုမှလည်း အပြစ်မပြောကြရှာဘူး…ဖမ်းတဲ့သူတွေကလည်း သတင်းပေးလို့ ဖမ်းရတာပါလေတဲ့… အရင်ဘဝက ဝဋ်ကြွေးရှိလို့ ကျွန်တော်တို့ခံရတာပါတဲ့… အခုကံနိမ့်နေတဲ့အချိန်မို့ထင်တယ်… အခုလို မထင်ထားတာတွေ ဖြစ်တာတဲ့… ???ဖြစ်တာက သတင်းပေးသူက… အဲ့ဒီဆိုင်မှာ ၂ ယောက်ထိုင်နေတဲ့ ဝိုင်းဆိုပြီး ဝိုင်းနေရာကို ပြောသွားတော့… လာဖမ်းတဲ့အချိန်မှာ ဖြိုးပြည့်စုံက တခြားမှာစကားသွားပြောနေတဲ့အချိန်… ပိုက်ဆံအိတ်နဲ့ ကားသော့ပဲ ကျန်ခဲ့တော့… ၂ ယောက်ထဲရှိနေတဲ့ သူ့မိတ်ဆွေတွေ ဆွမ်းခံရင်းငှက်သင့်တာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ တဲ့ ???
သတင်းပေးသူကိုရော… ဖမ်းတဲ့သူတွေကိုပါ… တကယ် အကောင်းဖက်က လှည့်တွေးပေးကြရှာတယ်…နောက်တစ်ချက် လေးစားသွားတာက… ၃ ယောက်လုံး တစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက် သံသယမဝင်ဘူး… မင်းကြောင့်. ငါ့ကြောင့်ဆိုပြီး အပြစ်ပုံမချကြဘူး… အချင်းချင်း မဟုတ်တာမလုပ်ဘူးဆိုတာ ယုံကြည်မှုရှိနေကြတယ်…ဖြိုးပြည့်စုံကတော့ ပြောရှာတယ်… နေမကောင်းလို့အလုပ်တွေ ခဏနားမယ်ပြောထားတာ… ပါးစပ်စီးသွားတာလားမသိဘူး တဲ့… အခု ဒီလိုပုံစံနဲ့ ဒီမှာ လာနားရတယ်လို့ပဲ သူ့စိတ်မှာ မှတ်ပါတယ်တဲ့… ???ဝဋ်ရှိရင်တော့ ရှောင်လို့ ဘယ်ရမလဲ အစ်မရယ်တဲ့… ???အားလုံးဝိုင်းပြီး ဆုတောင်းပေးနေပါတယ် မောင်လေးရေ… ??????အမှန်တရားအစစ်အတိုင်း ဖြစ်ပါစေ??????
စိတ်နှလုံး လှပပြီး အသံချိုချိုလေးတွေနဲ့ ပရိတ်သတ်ကြီးကို ပျော်ရွှင်စေတတ်တဲ့ အဆိုတော် ဖြိုးပြည့်စုံ အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက်ပါစေနော်။
Previous post ပူရှိန်းသကြားလုံးတောင်နာမည်ကြီးပြီး စျေးတက်သွားတယ်လို့ အဆိုတော်ဖြိုးပြည့်စုံ ထိန်းသိမ်းခံထားရမှုနဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဝေဖန်လိုက်တဲ့ ဆိုဖီယာ